Akhriso: Guurka Xumaada Oo Cudurradan Khatarta Ah Sababa! – Beegsonews-Wararka maanta
Home XOGAHA DUNIDA Akhriso: Guurka Xumaada Oo Cudurradan Khatarta Ah Sababa!
Akhriso: Guurka Xumaada Oo Cudurradan Khatarta Ah Sababa!
Daraasad cusub oo dhawaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in muranka joogtada ah ee ku soo noqnoqda lamaanaha is-qaba uu nolosha qeyb ka yahay ‘lkabada ruux ee is-qabaa colna maaha, heshiisna maaha’, laakiin uu keeni karo khilaafkaasi cudurro khatar ah oo marka dambe ku dhaca lamaanaha uu guurku ka xumaaday.
Daraasaddan oo ay sameysay Jaamacadda Ohio ee gudaha dalka Mareykanka ayaa lagu ogaaday in khilaafka joogtada ah ee lamaanaha is-qabaa uu keeno caabuqyo daran, waxaa aad ugu dhow in uu ku dhaco cudurka (Leak gut syndrome). Daraasaad hore ayaa tilmaamay in caabuqani uu keeni karo caabuqa xiidaha, mid ku dhaca kala gooysyada, roomatiisam, iyo xitaa kansar.
Daraasaddani waa tii ugu horreysay ee daahrogta khatarta guurka xumaadaa uu leeyahay, lamaanaha is-faham waagu waxa uu u keenaa cudurro farabadan.
Dr Janice Kiecolt-Glaser oo ka tirsan xarunta caafimaad ee Ohio ayaa yidhi: “Waxaan aaminsan nahay in khilaafka guurka ee maalin laha ah ugu yaraan dadka qaar uu u keeno dhibaatooyin ku yimaadda habdhiska dheefshiidka, kaas oo caabuqu uu cudur isku bedelay marka dambe.”
Waxa uu intaa sii raaciyay: “Dagaalka joogta ah waa astaanta lagu garto guurka xumaada, waxaana uu keenaa isbedello physiological ah oo aan wanaagsan.”
Cilmi-baarayaashu waxey baaritaan ku sameeyeen xiriir guurka 43 lamaane oo si gaar ah loo darsay, dadkan ayaa laga duubay muuqaallo iyagoo mawaadiic xasaasi ah ka wada hadlaya sida; biilka guriga oo kale.
Waxay diiwaangeliyeen, dhaqanka cadowtooyo, eedaynta ay isku jeediyaan iyo sida ay indhaha iskugu qabanaan xilliga ay caraysan yihiin, waxeyna dhiig ka qaadeen ka hor iyo kadib murankooda – sida ay daabaceen bahda Maandeeq Fm oonu qoraalkan ka soo xiganayno.
Michael Bailey oo ka tirsan mac’hadka cilmi-baadhista caafimadka Behavioral Research ee gobolka Ohio oo daraasaddan diyaariyay kana qeybqaatay ayaa sheegay in bakteeriyada ku jirta dhiigga marka ay u gudubto xiidmaha ay u keeni karo caabuqyo keeni kara in caafimaadka maskaxda ay dhibaato soo gaarto.
Cilmi-baadhayaashu waxay tilmaameen in markasta oo qofku sii waynaado uu cudurku la kordhayo, da’da dhex-dhexdaadka ah ee dadkii daraasaddan ka qeybqaatay waxey ahayd 38, iyadoo arrintaasi ay ka dhigan tahay in dadka markasta oo ay weynaadaan xaaladdu ka sii adkaaneyso.